Ebɛnadze Ntsi na Nyankopɔn Bɔɔ Asaase? | Asɛmpa
1. Ebɛnadze Ntsi na Nyankopɔn Bɔɔ Asaase?
Jehovah bɔɔ asaase maa mbanyin na mbaa. Asaase yi do na yefi ntsi ɔyɛ hɛn fie. Nna Nyankopɔn abɔ abɔfo dada dɛ wɔntsena ɔsor, dɛm ntsi ɔammbɔ nyimpa beenu a wodzi kan no, Adam na Eve, dɛ wɔnwo nhyɛ ɔsor mã. (Job 38:4, 7) Mbom no, Nyankopɔn dze nyimpa a odzi kan no kɛtsenaa Paradise fɛɛfɛw bi a wɔfrɛ no Eden ture mu. (Genesis 2:15-17) Jehovah maa nyimpa no nye ne mba a ndaamba ɔbɔwo hɔn no nyina enyidado dɛ wɔbɛtsena asaase do afebɔɔ.​—Kenkan Ndwom 37:29; 115:16.
Ahyɛse no, nna Eden ture hɔ nkotsee na ɔyɛ paradise. Nna nyimpa beenu no bɔwo ahyɛ asaase do mã. Ber rokɔ do no, nna wɔbɔhom asaase nyina do na wɔayɛ no paradise. (Genesis 1:28) Asaase nnkɛsɛɛ ara da. Ɔbɛyɛ adasamba hɛn fie afebɔɔ.​—Kenkan Ndwom 104:5.
Hwɛ video a wɔato dzin Ebɛnadze Ntsi Na Nyankopɔn Bɔɔ Asaase?
2. Ebɛnadze ntsi na sesei asaase nnyɛ paradise?
Adam na Eve annyɛ setsie amma Nyankopɔn, ntsi Jehovah tuu hɔn fii ture no mu hɔ. Paradise yewee na nyimpa biara nnkotum asan dze aaba bio. Ofitsi dɛm aber no, ndzebɔnyɛfo agye asaase abɔ do.​—Kenkan Genesis 3:23, 24.
Ana Jehovah epĩa no botae a ahyɛse no nna ɔwɔ ma adasamba no ato nkyɛn? Oho! Ɔnoara nye adze nyina do tumfo no, ntsi dza ɔakã biara bɛyɛ hɔ. (Isaiah 45:18) Ɔbɛma adasamba ebusua no asan akɔ asetsena a ɔbɔɔ ne tsir mu pɔw dɛ ɔbɛma woenya no.​—Kenkan Ndwom 37:11, 34.
3. Wobesi dɛn asan dze Paradise aba?
Wɔdze Paradise bɛsan aba asaase do bio ber a Jesus ridzi tum dɛ Nyankopɔn ne Hen no. Wɔ ɔkõ bi a wɔfrɛ no Har-Magedon mu no, Jesus bedzi Nyankopɔn n’abɔfoe enyim ma wɔaasɛɛ hɔn a wɔsoɛr tsia Nyankopɔn no. Iyi ekyir no, Jesus dze Abɔnsam bɔto fiadze mfrenhyia 1,000. Nyankopɔn no nkorɔfo benya nkwa osiandɛ Jesus bɛkyerɛ hɔn kwan na ɔaabɔ hɔn ho ban.​—Kenkan Nyikyerɛ 20:1-3; 21:3, 4.
4. Ebɛn aber na amandzehu bɛba ewiei?
Ebɛn aber na Nyankopɔn beyi emumuyɛsɛm nyina efi asaase do? Jesus dze “asɛnkyerɛdze” bi a ɔbɛma yehu ber a wiadze ewiei rebɛn no mae. Ndɛ wiadze nsɛm tsebea a ɔyɛ hu no ma yehu dɛ sesei dze yɛtse “wiadze ewiei” mber no mu.​—Kenkan Matthew 24:3, 7-14, 21, 22.
Wɔ mfrenhyia 1,000 mu a Jesus bɛtsena sor na oeedzi asaase do tum no, ɔbɛma amandzehu nyina aba ewiei. (Isaiah 9:6, 7; 11:9) Jesus bedzi tum dɛ Ɔhen na ɔaasan ayɛ edwuma dɛ Sɔfopanyin, na bɔn a hɔn a wɔdɔ Nyankopɔn ayɛ no, ɔaapepa efi hɔ. Ntsi, Nyankopɔn nam Jesus do beyi yarba, nkɔkorabɔ, mberwabɔ na owu efi hɔ.​—Kenkan Isaiah 25:8; 33:24.
5. Ndaamba, woananom na wɔbɛtsena Paradise?
Wɔ Ahendzi Asa do no, ibehyia nyimpa a wɔdɔ Nyankopɔn na wɔpɛ dɛ wosũa mbrɛ wobotum asɔ n’enyi
Nyimpa a wɔyɛ Nyankopɔn n’apɛdze na wɔbɛtsena Paradise. (1 John 2:17) Jesus somaa n’ekyirdzifo dɛ wɔnkɔhwehwɛ nyimpa a wɔdwe na wɔnkyerɛkyerɛ hɔn dza wɔbɛyɛ na ama wɔaasɔ Nyankopɔn enyi. Wɔ ndɛ mber yi mu no, Jehovah retsetse nyimpa ɔpepem pii ma wɔaafata ama ndaamba asetsena wɔ Paradise wɔ asaase do. (Zephaniah 2:3) Wɔ Jehovah Adasefo Ahendzi Asa ahorow do no, nkorɔfo sũa mbrɛ wɔbɛfata dɛ kunnom, egyanom, yernom nye nãnom pa. Awofo na mbofra nyina bɔ mu som wɔ koryɛ mu na wosũa mbrɛ wobotum enya asɛmpa no do mfaso.​—Kenkan Micah 4:1-4.
Ebɛn Botae na Nyankopɔn Wɔ ma Nyimpa?
Sɛ asaase dan paradise a, wiadze fofor no mu asetsena bɛyɛ dɛn?
Fa mona Fa mona Ebɛn Botae na Nyankopɔn dze Bɔɔ Asaase?